Igbo, John: Lesson 091 - Ịnọgide na Kraịst na-amị mkpụrụ dị ukwuu (Jọn 15:1-8) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 091 (Abiding in Christ)
D - NKWUKWU N'OGE GETSEMANI (Jọn 15:1 - 16:33)
1. Ịnọgide na Kraịst na-amị mkpụrụ dị ukwuu (Jọn 15:1-8)
5 Abụ m osisi vaịn ahụ. Ị bụ alaka. Onye na-anọgide na m, na m na ya, onye ahụ amị mkpụrụ, n'ihi na ọ bụghị m, ị pụghị ime ihe ọ bụla.
Nso akwa ukpono emi Jesus ọkọnọde nnyịn, nte ke nnyịn ikpada mme mbiet emi ẹdude ke esịt esie. O kere ndụ ime mmụọ n'ime anyị. Dịka dị ka osisi osisi vaịn na-egosi na mgbe nke a gasịrị, nke a na-eme ka osisi na-eto eto gaa alaka ụlọ ọrụ dị mma na ike. N'otu aka ahụ, onye kwere ekwe na-etolite na àgwà niile na àgwà ọma ndị Kraịst ekele nye Jizọs. Ọ bụghị naanị site n'okwukwe anyị, mana amara na amara. Anyị nwere ọrụ ịbanye na Jizọs.
Mgbe ahụ, anyị na-achọta okwu na-adịghị ahụkebe nke pụtara ugboro 175 na ozioma, "N’IME YA", na nke kwekọrọ na ya, "N’IME ANYI", dịtụ ntakịrị ntakịrị na ozioma. Onye kwere ekwe ọ bụla nwere ikike iji ya na Jizọs nọ n'okpuru ọgbụgba ndụ ọhụrụ. Njikọ a siri nnọọ ike na anyị na-ahụ onwe anyị na Jizọs.
Onyenwe anyị na-emesi anyị obi ike na anyị n'otu n'otu anaghị akwụsị site na ikwere, anyị adịghị emerụ onwe anyị n'ihe omimi. Ọ na-eme ka uche gị sie ike ma mee ka mmụọ gị jupụta na ndụ gị. Kraist choro iduga gi rue ntozuzu ma kpogharia n'ime gi oyiyi o zubere maka gi site na mmalite. Nhọrọ ya na àgwà ya abanye n'obi ndị kwere ekwe. Olee ebe okwukwe anyị na ịhụnanya anyị dị?Gịnị bụ nzube nke njikọ nke Ọkpara Chineke na ụmụ mmadụ? Ntak emi Jesus akakpade ke eto, ndien ntak emi ẹkenyenede Spirit ke esịt mbon akpanikọ? Kedu ihe Onyenwe anyị chọrọ n'aka gị? Mkpụrụ ime mmụọ nke enyere gị sitere na Chineke. Ndị a bụ onyinye nke Mmụọ: Ịhụnanya, ọṅụ, udo, ndidi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ na njide onwe onye.
Anyi kwesiri imata na anyi enweghi ike ime ihe a nke anyi. Ọ na-esiri anyị ike ijide ihe dị anyị mkpa, dịka iku ume, ịga ije na ikwu okwu, ka naanị ekpere, okwukwe na ịhụnanya. Anyị nwere ihe ùgwù dịka ndị kwere ekwe iji nwee ndụ ime mmụọ na-esite na Jizọs naanị. Anyị kwesịrị ikele ya maka ọdịmma ime mmụọ na ikike nke Chineke nyere anyị. Ike niile na oru a bu onyinye sitere na Chineke. N'ebe ọ nọ, anyị enweghị ike ime ihe ọ bụla.
6 Ọ bụrụ na mmadụ anọgideghị n'ime m, a tụpụrụ ya dị ka alaka, ọ na-akpọnwụkwa; ha we chikọta ha, tubà ha n'ọku, ewe rechapu ha.
I ga-arụ ọrụ n'ime Kraịst. N'aka nke aka ayi necheta na ndu nke Mo Nso na ibigide nime Kraist bu onyinye. N'aka nke ọzọ, anyị na-ahụ na onye na-eso ụlọ ọrụ na Kraịst dị ka onye na-egbu onwe ya. Nke a na-achụsie ike ma mee ka a tụba ya n'ọkụ nke ọnụma Chineke. Ndị mmụọ ozi ga-achịkọkọta ndị gbahapụrụ Kraist ma tụba ha n'ọchịchịrị n'èzí. Ịba mba nke akọ na uche ha agaghị ekwe ka ha zuru ike. Ruo mgbe ebighi ebi, ha ga-ahụ Chineke n'ime ọmịiko ya na ha. Ha ga-amata otú, n'oge gara aga, ha nọgidere n'ịhụnanya Ya. Ọ bụrụ na ha ahapụ Ya, ha ledawo Onye Nzọpụta ha anya ma gbaa ha ọkụ na mbibi ebighi ebi.
7 Ọ bụrụ na ị nọgide na m, ma okwu m nọgidere n'ime gị, ị ga-ajụ ihe ọ bụla ịchọrọ, a ga-eme gị.
Onye ahu nke nogide na Kraist nagide ya na nmekorita uche. Dị nnọọ ka di na nwunye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye maara echiche na ebumnobi nke ibe ha. Ya mere, onye ahu nke huru Kraist n'anya mara uche ya ma nogide na onyenwe ya. Ịbanye n'ime Akwụkwọ Nsọ kwa ụbọchị ga-eme ka anyị nwee ezi ọchịchọ nile ka anyị wee nwee ike ịchọta ihe ọ na - eme, n'ihi na obi anyị jupụtara n'okwu ya.
Mgbe ahụ, anyị agaghị ekpe ekpere dịka ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe anyị si dị, ma anyị ga-ege ntị n'atụ ọkụ na mmepe nke Alaeze ya. Anyị na-aghọ ndị na-agbachite ọnụ na-agbaso agha ime mmụọ. Mgbe ahụ, obi anyị ga-ejupụta na otuto na ekele, anyị na-enyekwa Onye Nsọ ihe niile anyị na-eche banyere ya, ndị nọ ná mkpa na ndị nọ n'ahụhụ, ndị Mmụọ Nsọ na-eme ka anyị mata. Jizọs na-arụ ọrụ n'ụwa anyị na-adabere n'ekpere anyị kwere. Ọ na-enye anyị ohere ikere òkè n'ọrụ nzọpụta ya. Ị na-ekpe ekpere? oleekwa otú? Ị na-ekpe ekpere na Mmụọ Nsọ? Ebum n'uche Chineke nwere ebum n'uche di iche iche. Otu bụ ịdị nsọ gị; onye nke ọzọ na Chineke choro izo puta mmad niile ma webata ha n'amaokwu nke eziokwu. Ọ bụrụ na anyị na-eje ije n'ịdị umeala n'obi, a na-ede aha Chineke nsọ. Rịọ Onyenwe gị ka ị wụkwasị Mmụọ nke ekpere n'ime obi gị, ka ị wee mịpụta ọtụtụ mkpụrụ, ma nye Nna gị nke eluigwe na Kraịst otuto gị.
8 Nime nka ka otuto diri Nnam, ka unu we mia nkpuru ọtutu; unu gābu kwa ndi nēso uzọm.
Jizos choro kaiwe puta mkpur. O nweghi obi uto n'adighi nso n'idi ndu gi, ma obu inwe mmeri nke ndi mmadu ole na ole, ma obu na i bu ekele. Ee e! O choro ido gi nso, ka i zuo okè dika Nna zuru oke, na ka mmadu nile nwere ike izoputa. Ejila afọ ojuju.
EKPERE: Anyị hụrụ gị n'anya, Onyenwe anyị Jizọs, n'ihi na ihere anaghị eme gị ịnakwere anyị dịka ndị òtù gị. Anyị na-arịọ maka ntughari nke ndị niile ị kpọrọ ka ha bịa gị. Anyị kpọrọ aha ha n'otu n'otu. Anyị kwenyere na ị zọpụtala ha site na obe gị. Nzo puta nke mmo nso ka enyere ha nzo puta. Ka e nye aha Nna otuto na aha gị n'ime Mmụọ Nsọ. Anyị enweghị ike ime ihe ọbụla na-enweghị gị.
Gịnị mere anyị ji nọrọ n'ime Jizọs na ya n'ime anyị?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:35 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)